Kutevera kutyisidzirwa kwehutachiona hwekorona kupararira kubva kuChina, kuchena kwenzira dzekufambisa kwakatonyanya kukosha. Zvitima nemabhazi akabatana neSamsun Metropolitan Municipality SAMULAŞ A.Ş., anoshandiswa nevanhu vanopfuura zviuru zana zuva rega rega, kubva kumusoro [More ...]
Mersin Metropolitan Municipality, iyo inoramba ichishanda kuvandudza tsoka yevanotakura neruzhinji nekuvandudza mhando, inopa kudzidziswa kunevanoshanda pamwe nevarairidzi vane chekuita nezvematambudziko akadai sefambiro, hukama neveruzhinji, rubatsiro rwekutanga. [More ...]
Mhemberero yekupiwa mubatanidzwa weSocial Bikecle kukwikwidza yakaitirwa muIzmir panguva imwe chete nemaguta 29 eEurope mukati meiyo nzvimbo yeEuropean Mobility Svondo yakaitwa nhasi. Yakarongedzwa neEuropean Commission Joint Research Center sechikamu cheEuropean Mobility Svondo (EuropeanMobilityWeek) [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality yakavhura kadhi yekushandisa kiredhiti kuBostanlı Pier. Munhanho yekutanga, iyo nzvimbo, inongotengwa makadhi emakore makumi matanhatu nemasere, ichashandira mamwe marudzi emakadhi zvakare. [More ...]
İZTAŞIT Ndichauya kuHupenyu muBergama
Izmir Metropolitan Meya Tun Tun Soyer akasangana muhtars kubva Bergama. Musangano uyu wakatora maawa mashanu. Tunç Soyer ane mapurojekiti akawanda anozoitwa mudunhu, kubva kune chekufambisa kuenda kune zvigadzirwa, kubva pakurima kuenda kumapurojekiti emagariro. [More ...]